This entry was posted on Friday, August 01, 2008 and is filed under ဗဟုသုတများ . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
အညာသားလေး ရေ Photo ယူသွားပါတယ် ။ ရှဲရှဲ ပါ ။ ဒါထက် ပုံကြီးပဲ မဟုတ်ပဲ Wiki link လေးပါထဲ့ပေးရင်ပိုကောင်းမလား
cbox က copy paste လုပ်ပြီး ရေးလို့လဲမရတော့ဘူး။ သူများက Burglish Text Editor နဲ့ ရေးနေရတာ လုပ်ပါအုန်း :(
မိုက်သားပဲ မြန်မာစကားနဲ့အဲလိုမျိုး ရှိမယ် တခါမှ မတွေးမိဘူး အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့တော့ တတ်နိုင်သလောက် ၀င်ဖြည့်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ကျေးဇူးနော်။